Yeuka kuti mwedzi yechando vari dzoutsinye mune dzimwe nzvimbo kondinendi. chando, chando uye mambofambwa kuti nyore uye inotyisa nokuti vatyairi kufamba migwagwa. Kufamba nebhazi kana motokari zvinoreva braving ari kuchitonhora uye nechando migwagwa. Migwagwa tsvedza, uye motokari kana bhazi anogona Vaiisa kudzora.
Pasinei mugwenga, chena chando ekunze, Paris anoramba hope rwendo yegore. Hapana chikonzero kurasikirwa nezvose Paris anofanira kupa chete nokuda kutonhora ekunze. Pano Ndokusaka unofanira kushanyira Paris munguva yechando nguva uye nei chitima kufamba ndiyo nzira yakanakisisa kuti ikoko:
Kana uri kutsvaka nzira yakanakisisa kusvika Paris, uchawana kuti chitima kufamba sei kuzviita zvakanaka uye nyore. Kana uchigara Europe kana vakananga kuna Paris kubva guta European, siyana-siyana soro-nokukurumidza nezvitima nokubuda pakati Paris rimwe zuva. Zvinotevera mazita anoratidza sei nokukurumidza unogona kusvika muna Paris kubva mamwe maguta Europe yakakura paunosarudza mumwe zhinji dzakakwirira-nokukurumidza nezvitima iripo:
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-winter-paris/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)